Udumo lwekhishi elingumahamba nendlwana
UNKSZ Lamile Ngidi onekhishi elingumahamba nendlwane elisenxanxatheleni yezitolo iBoxer Centre, eseNdwedwe. Isithombe: Sithunyelwe
Phili Mjoli | October 8, 2020
USEZAKHELE udumo owesifazane waseNdwedwe, nowashiya umsebenzi wakhe ngoba ezwa sengathi awusenazo izinselelo kanti usedayisa ukudla enxanxatheleni yezitolo zakule ndawo.
UNksz Laminile Ngidi ofundele ukuba wumpheki wasebenza nasemahhotela amaningi, usevule ikhishi elingumahamba nendlwana elidayisa ukudla okunjengamasemishi, chicken wraps namasaladi eBoxer Centre, eNdwedwe.
Le ntokazi ine-Advanced Diploma yeProfessional Chef eyifundele eChristina Martins Culinary Art Centre, nenye yeProfessional Chef eyithole eRoyal Hotel, iyeke umsebenzi isiqeqesha abanye eZimbali Lodge ngo-2013.
“Ngiwumuntu oyithandayo inselelo bekuthi njalo uma sengizwa ukuthi umsebenzi awusenayo inselelo, ngiwushiye. NaseZimbali ngenza okufanayo kodwa ngicabanga ukuthi okunye kwakwenziwa ukuthi ngangingenazo izindleko eziningi. Kwakulula kimi ukuthi ngenze noma yini engiyithandayo,” kusho uNkk Ngidi.
Uthe ngesikhathi eseyeke umsebenzi wasungula inkampani ephekela imicimbi kodwa izinto azihambanga ngendlela.
“Ngaba nezinselelo eziningi engangingazibonanga ukuthi zizoba khona, uma sengizisebenza. Ngangicabanga ukuthi ikhono lami lizongivulela amathuba kanti ngasohlangothini lwebhizinisi izinto azihambi kanjalo. Ngagcina ngiyekile, ngabuyela ekhaya nokuyinto engangingayihlelanga. Ngangingathandi ukuthi ngiqale phansi ngibe yingane ezokondliwa ekubeni sengikhulile. Ngaqala ngadayisa amasemishi phambi kwamahhovisi akwamasipala, ngifuna ukubona ukuthi izinto zizohamba kanjani.”
“Ngangingafuni ukudayisa ukudla ngoba bakhona omama abakudayisayo. Ngangifuna ukuqhamuka nento engekho futhi ezokhombisa ukuthi ngikufundele ukwenza ukudla kodwa kube yinto umuntu osemsebenzini angathanda ukuyidla.”
Uthe ubone ukuthi ukudla kwakhe kuyathandwa ngesikhathi esethola ama-oda ngocingo kwabasebenza ezindaweni eziseduze, bembuza ukuthi uzofika nini.
“Ngabona lapho ukuthi kumele ngivule ikhishi eliwumahamba nendlwana ukuze ngikwazi ukusebenza kahle. Izinto bezihamba kahle impela futhi ngiqashwa nangabantu abafuna ukuthi ngibenzele i-starter noma i-finger lunch. Izinto zonakale ngesikhathi kuvalwa izwe ngoMashi,” kuchaza umpheki.
Waphoqeleka ukuthi acabange okunye angakwenza ngoba amahhovisi amaningi abengasebenzi, ngakho engenawo amakhasimende abengathenga ukudla.
“Ngase ngiqala ngibhaka amakhekhe ngoba abantu bebengafuni ukuba wuvanzi beyowathenga ezitolo. Lolu hlangothi lwebhizinisi lamakhekhe liyakhula kangangoba manje sengiyabona ukuthi ngeke ngisakwazi ukumelana nomthamo wamakhasimende ngingedwa ngoba emini ngisuke ngingekho ngidayisa ukudla, sengicabanga ukuthi kuzomele ngibe nomsizi,” kusho yena.
Uthe okunye okumenze waduma kakhulu ukuthi unekhasi leFacebook lapho efaka khona izinhlobo zokudla, iBusa with MaBusani.
Umlingisi ukhala ngokucwaswa
Amakhadi aseSassa azoqedwa
Luyabheda uhlelo kuShauwn Mkhize inkantolo igunyaza ukudliwa kwenkampani yakhe
Yayingabhalisiwe itekisi ebhubhise 13